Xiriirka ka dhexeeya sirdoonka dheecaanka iyo hawlaha fulinta | Tababarka Garashada
Waxaan hore uga hadalnay dhowr xaaladood oo ah sirdoonka iyo howlaha fulinta, xitaa ku tilmaamay cilmi -baaris keeni lahayd iftiin kala duwanaansho muhiim ah.
Isla mar ahaantaana, waa lama huraan in la xuso heer go'an oo is -dhaafsi ah oo u dhexeeya qeexitaannada labada dhisme ee aragtida ah; tusaale ahaan, xirfadaha qorsheynta iyo xallinta mushkiladaha waxaa si nidaamsan loogu adeegsadaa fikradaha kala duwan iyo sharraxaadda hawlaha fulinta. Si kastaba ha ahaatee, labadan awoodood waxay inta badan gacan ka geystaan ​​sharraxaadda dabeecadaha aan caadiyan ku qeexno “garaad”.
Marka la eego isku ekaanshaha u dhexeeya sirdoonka iyo hawlaha fulinta, waxaa macquul ah in la filo in kuwii hore ugu yaraan qayb ahaan la saadaaliyo kan dambe. Si kale haddii loo dhigo, waa inaan filannaa marka waxqabadka imtixaannada si loo cabbiro hawlaha fulinta uu kordho, waxaa kordhay dhibcaha imtixaannada si loo qiimeeyo sirdoonka.
Marka la eego imtixaannada hawlaha fulinta, dhowr qoraa ayaa tilmaamaya in imtixaannada lagu qiimeeyo iyaga oo u maraya hawlo aad u dhib badan (tusaale ahaan, Tijaabada kala soocida Wisconsin Card ama Tower of Hanoi), waxay ka maqan yihiin isku halayn iyo ansax. Mid ka mid ah isku dayyada ugu caansan ee la isku dayo in lagu joojiyo dhibaatadan waa tan Miyake iyo kuwa la shaqeeya kuwaas oo isku dayay inay u kala jebiyaan hawlaha fulinta qaybo ka fudud iyo, dhab ahaan, saddex:
cusboonaysiinta xusuusta shaqada;
Iyada oo loo marayo daraasad aad caan u ah oo lagu sameeyay dadka qaangaarka ah ee heer jaamacadeed, isla cilmi-baarayaashu waxay iftiimiyeen sida saddexdaas xirfadood ay isugu xiran yihiin laakiin sidoo kale sida muuqata la kala sooci karo, sidoo kale waxay muujinayaan inay awoodi doonaan inay saadaaliyaan wax-qabadka hawlo aad u adag (tusaale ahaan, Tower of Hanoi iyo Tijaabada kala soocida Wisconsin Card).
Ducaan iyo asxaabtiisii 2010kii waxay go'aansadeen inay tijaabiyaan tusaalaha Miyake sidoo kale da'da koritaanka iyo, si sax ah, shakhsiyaadka da'doodu u dhaxayso 11 iyo 12 sano. Ujeeddadu waxay ahayd in la fiiriyo haddii ururinta hawlaha fulintu ay la mid tahay waxa laga helay dadka waaweyn, taas oo ah, oo leh saddex qaybood (xannibaad, cusboonaysiinta xusuusta shaqada iyo dabacsanaanta) ee la xidhiidha midba midka kale laakiin weli sida muuqata la kala saari karo.
Ujeeddo kale ayaa ahayd qiyaas sida sirdoonka dheecaanka loogu sharaxay hawlaha fulinta.
Si tan loo sameeyo, qorayaasha daraasaddu waxay 61 qof u gudbiyeen qiimeyn aqooneed iyada oo loo marayo Matriyada hormarka leh ee Raven, iyo qiimaynta hawlaha garashada saddexda qaybood ee hore loo sheegay.
Marka la eego ujeedka koowaad, natiijooyinku waxay xaqiijiyeen dhab ahaan filashooyinka: saddexda qaybood ee la cabiray ee hawlaha fulinta ayaa isku xidhnaa laakiin weli waa la kala saari karaa, sidaas darteed ku -celcelinta, shakhsiyaadka aadka u yaryar, natiijooyinka la daabacay 10 sano ka hor Miyake iyo kuwa la shaqeeya.
Si kastaba ha noqotee, laga yaabee inay xitaa ka sii xiiso badan yihiin kuwa la xiriira su'aasha labaad: waa kuwee qaybaha howlaha fulinta sharraxay dhibcaha la xiriira sirdoonka dareeraha ugu badan?
Ku dhowaad dhammaan imtixaannada hawlaha fulinta waxay muujiyeen xiriir weyn (waxay u ekaayeen inay gacmaha isula tagaan) oo leh dhibcaha imtixaanka caqliga. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo "la saxayo" qiimayaasha heerka isku xirnaanta isdhaafsiga ee u dhexeeya xannibaadda, dabacsanaanta iyo cusbooneysiinta xusuusta shaqada, kaliya kuwa dambe ayaa si weyn ula xiriiray sirdoonka dareeraha (sharxaya qiyaastii 35%).
Inkasta oo inta badan tirakoob ahaan lala xiriiriyo, hawlaha sirdoonka iyo fulinta ayaa weli u muuqda inay yihiin laba dhisme oo kala duwan ama Si kastaba ha ahaatee, cusboonaysiinta xusuusta shaqaysa ayaa u muuqata inay tahay qayb ka mid ah hawlaha fulinta oo si dhow ula xidhiidha sirdoonka. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaanan nafteenna khiyaanayn in su'aashu aad u fudud tahay (laga yaabee inaan u malayno in xusuusta shaqadu hooseyso ay u dhigantaa garaadka hoose iyo dhanka kale), waxaa mudan in la tixgeliyo in shaybaarrada aan ahayn kuwa "celceliska", arrimuhu aad u murugsan yihiin. Tusaale ahaan, khalkhalka barashada gaarka ah, dhibcaha xusuusta shaqaynaya uma muuqdaan inay si xooggan ula xiriiraan IQ. Sidaa darteed waa muhiim in loo tixgeliyo xogta ka soo baxday cilmi -baaristaan ​​inay tahay cunno muhiim u ah fikirka, iyadoo aad loo dhawrayo halkii lagu degdegi lahaa gabagabada.
Carruurta hibada leh: kala saar sirdoonka iyo hawlaha fulinta
Duan, X., Wei, S., Wang, G., & Shi, J. (2010). Xiriirka ka dhexeeya hawlaha fulinta iyo sirdoonka carruurta 11-ilaa 12-jirka ah. Imtixaanka Cilmi -nafsiga iyo Qaabaynta Qiimaynta, 52(4), 419.
Giofrè, D., & Cornoldi, C. (2015). Qaab dhismeedka garaadka carruurta leh naafonimada barashada gaarka ah way ka duwan tahay marka loo barbardhigo carruurta sida caadiga ah u koraysa. Sirdoonka, 52, 36-43.
Miyake, A., Friedman, NP, Emerson, MJ, Witzki, AH, Howerter, A., & Wager, TD (2000). Midnimada iyo kala -duwanaanshaha hawlaha fulinta iyo wax -ku -biirintooda hawlaha adag ee “lobe frontal”: Falanqaynta doorsoomaha qarsoon. Maskaxda maskaxda, 41(1), 49-100.
howlaha fulinta, sirdoonka, hawlaha sirdoonka iyo fulinta, xusuusta shaqada, xusuusta ka shaqeysa iyo sirdoonka, xusuusta shaqada iyo IQ, qi
Xiriirka ka dhexeeya sirdoonka dareeraha iyo hawlaha fulinta2021-08-222021-08-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/la-relazione-tra-intelligenza-e-funzioni-esecutive.jpg200px200px
Hawlaha fulinta qabow iyo kuleylka: maxay saadaalinayaan midba midka kale?Maqaallada, Hawlaha Fulinta, Hawlaha Fulinta, Xusuusta Shaqaynta